Mikasa ny hamonjy ilay ‘reny tena mahafinaritra indrindra eto ambonin’ny tany’ ao amin’ny tobin’i Shina ny lehilahy Uyghur iray · Global Voices teny Malagasy
Ahoana ny fomba handrahonan'ity mpiasan'ny trano famakiam-boky teo aloha ity ny fanjakana Shinoa?
Voadika ny 01 Avrily 2019 5:30 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Shqip, русский, Español, Ελληνικά, Français, عربي, English
Mirshad Ghalip, niresaka momba ny fitazonana ny reniny tany XInjiang Shina. Pikantsary avy amin'ny lahatsary YouTube nivoaka tamin'ny 25 Martsa 2019.
Nanatontosa lahatsary feno fahavitrihana mba hamonjena ny reniny, Zumret Awut, 58 taona, any amin'ilay antsoiny hoe “toby fihazonam-bahoaka” Shinoa i Mirshad Ghalip, lehilahy teratany Uyghur teraka tany Shina.
Mihevitra i Ghalip fa iray amin'ireo gadra maherin'ny iray tapitrisa raikitra ao amin'ny “toby fiarenana” Shinoa mampahonena any Xinjiang i Zumret Awut. Miaiky anefa izy na izany aza fa tsy azony antoka raha mbola velona izy.
Nampidirina tao amin'ny toby tamin'ny taona 2017 ny reniny rehefa nanan-kery ny fanaraha-maso henjana natao tamin'ny vahoaka nanerana an'i Xinjiang teo ambany fitondran'i Chen Quanguo lehiben'ny antoko komonista any amin'ny faritra tamin'io taona io ihany.
Nofaritan'i Shina ho “foibem-pampianarana sy fanabeazana” handraisana anjara an-tsitrapo ary natao mba hiadiana amin'ny fisitahana sy ny radikalisma ara-pinoana ity ao Xinjiang ity .
Mampiseho ny fijoroana vavolombelona matanjaka nataon'i Mirshad Ghalip fa mety hiafara any amin'ireo foibe ireo ny olona rehetra na dia tsy mbola nahiahin'ny fanjakana mihitsy aza izy ireo talohan'izay.
Efa ampy ny fananana fifandraisana any amin'ny firenena vahiny mba hiheverana ny olona iray fa mila ny “fiarenana” – samy mianatra any ivelany i Mirshad Ghalip sy ny anabaviny .
Amin'ny maha vondrom-poko tsy-Han lehibe indrindra azy ao amin'ny faritra dia heverina fa ny Uyghurs no betsaka indrindra amin'ny mponina ao amin'ny foibem-pamonjana ao Shina .
Maro anefa ireo Uyghurs any ivelan'i Shina no tsy sahy niresaka ny fijalian'ny havany any Xinjiang raha tsy vao haingana.
Ireo Kazakhs — vondrom-poko faharoa Shinoa tsy Han lehibe indrindra ao amin'ny faritra — izay mahazo tombony avy amin'ny fikarakarana fihetsiketsehana nanehoana hevitra kokoa sy tsara kokoa ary indrindra noho ny asan'ireo mpikatroka ao Azia Afovoany mpifanolo-bodirindrina amin'i Shina, any Kazakhstan .
Nanova betsaka ny fahanginan'ny Uyghur izay nolazain'i Ghalip fa “tena amin'ilay tian'ny antoko komonista Shinoa indrindra” ny hetsika #IzahoIhanyKoaUyghur.
Saingy mbola manohy maneho ny fahadisoam-panantenany noho ny ezaka ara-diplaomatika maivana ao Xinjiang ny Uyghurs sy ireo vahoaka avy amin'ny ankamaroan'ny vondrona Miozolomana avy ao amin'ny faritra.
Tao anatin'ny hetsika nanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny lanjan'i Shina ara-toekarena any amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao dia nanamafy ny Fikambanan'ny Fiaraha-miasa Islamika – izay ahitana fanjakana Miozolomana miisa 57 fa “mankasitraka ny ezaky ny Repoblika Entim-bahoakan'i Shina amin'ny fikarakarana ny olom-pirenena Miozolomana” ho isan'ny vahaolana noraisina nandritra ny fivorian'ireo minisitry ny raharaham-bahiny tamin'ity volana ity.
Ny hetsika ara-diplaomatika momba ity karazana ity dia mamela an'i Mirshad Ghalip sy ny hafa tsy hanan-tsafidy afa-tsy ny manamafy feo kokoa sy manao fanentanana mafy kokoa ho fanafahana ny havan-tiany.
Ny Angondrakitra momba ireo Niharam-boina ao Xinjiang no angondrakitra fikarohana lehibe indrindra amin'ny fiteny Anglisy mifandraika amin'ireo niharam-boina tamin'ny famoretana ao XUAR amin'izao fotoana izao.